admin | Bosaso Media News
Madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa maanta lagu wadaa inuu booqasho ku tego magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya halkaas oo uu kusoo dhaweyn doono madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Afwerki ay ku casuuntay dalka si ...
Raisalwasaare Theresa May oo ka badbaaday cod kalsoonida kala laabasha ah oo ay u qaadeen xildhibaanada xisbigeeda. Waxa ay heshay 200 oo cod, halka 117 ay ka codeeyeen Theresa May. Mrs May oo ka hadlaysay waddada Downing, ayaa waxa ay ...
Haween ka kalluumeysta xeebihii burcad badeeda Soomaaliya laga sifeeyay
Toddobaadkan waxaa tobban sanadood jirsaday ciidammada badda ee Midowga Yurub ee ka howlgalayay badaha Soomaaliya. Howlgalka Atlanta ee Midowga Yurub ayaa waxa uu mudadaas ka shaqeynayay sidii uu u dhowri lahaa qaraarkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee 2008-dii kaas ...
Waxay ahaan jirtay tababare kubadda Koleyga, haatan waxay Shaah ku iibisaa Jigjiga
Siraad Xuseen Miicaad waxay mar ahaan jirtay tababare kubadda Koleyga gabdhaha waxay haatan la daala dhaceysa sidii ay usoo dhacsan laheyd nolol maalmeedkeeda.Shaah ayay ku iibisaa gidaar hoostiisa gudaha magaalada Jigjiga. Waxay ganacsi yar oo ka kooban labo Tarmuus oo ...